10/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Baomba teny Tanjombato : Nalefa eny Antanimora ilay tompon’antoka voalohany
Izao vao nadoboka vonjimaika eny Antanimora ilay lehilahy tompon’antoka tamin’ny fametrahana ilay fitaovana voalaza fa baomba teny amin’ny toeram-piantsenana lehibe iray teny Tanjombato, iray volana sy telo andro lasa izay. Ity farany izay mbola nanaraka …Tohiny
Lavanila hosoka : Tra-tehaka ny mpisoloky iray
Mpivarotra lavanila hosoka iray indray no voapaingotry ny mpitandro filaminana miasa ao amin’ny “SUT” Tsaralàlana, ny zoma lasa teo teny Ambodivona. Raha ny fampitam-baovao dia fantatra fa noho ny resaka fisolokiana tamin’ny fivarotana menaka lavanila …Tohiny
Banky : Efa mirona amin’ny findramam-bola ny antsasa-manilan’ny mpanjifa
Tsy dia fanaon’ny Malagasy hatramin’izay. Efa manomboka liana sy mirona amin’ny findramam-bola ny antsasa-manilan’ny mpanjifa amin’ireo banky samihafa misy eto amintsika. Ny findramam-bola ho an’ny fitaovana ilaina andavanandro na ho an’ny fanatsarana kokoa ny fiainana …Tohiny
Antoko Tiako I Madagasikara : Fototry ny fanakorontanana
Rehefa takatry ny vahoaka teny amin’ny 13 Mai ny tetika maloton’ny Tim, dia maro tamin’izy ireo no nihemotra ka tsy niakatra kianja intsony. Nitovitovy noho izany ny isan’ireo nipetraka teny ambony lampihazo, sy ireo mbola …Tohiny